Nafaqo Wanaagsan Kala shaqeyso - Tamarta Mahada leh
Home > Nala shaqeyn
Ku soo biir kooxdeenna farxad leh
Lataliyaha Badbaadada Shidaalka iyo Fudud
Hadda ma ku lug leedahay doorka bixiya talada tamarta ee qoysaska? Miyaad sidoo kale bixisaa talo ku saabsan saboolnimada saboolnimada sida talooyinka macmiilka ay tahay in ay sameeyaan marka aysan awoodin inay bixiyaan biilasha ama ma awoodaan inay awoodaan inay kululeeyaan guryahooda? Miyaad fahamsan tahay siyaabaha kala duwan ee tamarta loo badbaadin karo guriga sida dabaysha, kuleylinta kululaynta iyo cusbooneysiinta korontada? Ma taqaanaa barnaamijyada deeqaha hadda jira sida Shirkadda Tamarta Shirkadda?
Energy Energy waxay ka mid tahay ganacsiyada tamarta kaydka ah ee UK ee aasaasiga ah, oo ku salaysan Cornwall, laakiin adeegyo u fidisa guryaha Ingiriiska. Waxaan dhawaan dib u bilaabiey adeegyo loogu magac daray Mashruuca Heat ee loogu talagalay maamullada degaanka si ay u siiyaan talooyinkooda tamarta iyo helitaanka deeqaha si ay gurigooda uga dhigaan kuwo diirran una keydiyaan lacagta biilasha tamarta.
Waxaan raadineynaa lataliye tamar oo cusub si aan ugu biirno kooxdayada saaxiibtinimo ee yar yar si aan u qaadno wicitaanada waxaanna siinaa talooyin xagga tamarta ah oo ku saabsan telefoonka, oo aan saldhig u aheyn dhowaan Redruth, laakiin ka dib xafiiskayaga Perranporth. Haddii aad aaminsan tahay inaad leedahay waayo-aragnimo, qaab saaxiibtinimo oo haboon oo aad rabto inaad ku biirto shirkad abaalmarin ah oo sii kordhaysa, ka dibna fadlan noo soo dir CV-gaaga. Iyadoo aan lagama maarmaan ahayn, shuruudaha la xiriira sida NEA-du waxay noqon doontaa faa'iido kala duwan.
Fadlan u soo dir CV-gaaga oo ay ku jiraan faahfaahinta mushaharkaaga hadda iyo wixii ogeysiis ah ee looga baahan yahay loo-shaqeeyaha hadda jira haddii ay khuseyso mail@happyenergy.co.uk
Sababo badan oo ah qandaraasyo cusub, waxaan raadineynaa gaaska u qalma, LPG iyo injineeriyiin kululeeyayaasha si ay ugu biiraan kooxdayada ku salaysan Perranporth. Inkastoo aan muhiim ahayn, injineerada leh shahaadada qaybta P waxay noqon doontaa faa'iido kala duwan. Waxaa lagu siin doonaa shirkad wiish laakiin waxaad u baahan doontaa qalabkaaga. Isku-dubaridaha iskood u shaqeysta iyo injineeriyeyaasha qandaraaska ayaa sidoo kale ka fikiray
Mushaarooyinka dhammaan mawaadiicda waxay ku xiran tahay khibrad iyo shahaadooyin. Fadlan u dir CV-gaaga si aad u hesho faahfaahinta shahaadooyinkaaga, mushaharka hada, rajada mushaharka iyo mudada ogeysiiska ee looga baahan yahay loo-shaqeeyahaaga hadda mail@happyenergy.co.uk
Self-shaqaale Gaas, injineerada kuleyliyaha LPG & Oil iyo qandaraaslayaasha - Devon iyo Cornwall
Sababtoo ah ku guulaysiga qandaraasyada waaweyn ee shirkadaha waaweyn ee 6 iyo, iyadoo ay ugu wacan tahay baahida sii kordheysa ama beddelida adeega kuleylinta / kuleylinta dhexe, Shirkadda Energy waxay raadineysaa injineeriyaal shaqaale ah oo iskiis u shaqeeya kuwaas oo rakibaya nidaamyada kuleylka kuleylka buuxa iyo hagaajinta kuleylaha oo bilaash ah qoysaska dakhliga hoose Dhamaan Devon. Waxaad ka shaqeyn doontaa diiwaangelinta Badbaadada Gaas laakiin waxaad u baahan tahay caymiskaaga mas'uuliyadda dadweynaha, bakhtiiyahaaga iyo qalabkaaga waxaana lagugu siin doonaa qiimo go'an oo lagu dhammaystiro shaqada. Haddii aad xiiseyneyso, fadlan buuxi foomka codsiga hore halkan.
Happy Energy waxaa loo doortay 'Ganacsiga ugu Fiican' ee Abaalmarinta Ganacsiga Cornwall iyo dakhliga sannadkii hore ee ka badan £ 11 million thanks thanks dadkeena weyn.
Deeqaha kuleylka iyo kuleylka ee UK
Energy Energy waxay ka mid tahay ganacsiyada kaydka kululeynta iyo tamarta tamarta ee UK. Mashiinadeenu waxay kaa caawin karaan inaad hoos u dhigto biilasha tamarta gurigaaga adoo ku rakibaya deeqo badan oo maalgelin ah oo lagu maalgeliyo kuleylinta, tamarta badbaadinta iyo tamarta tamarta dib loo cusboonaysiin karo.
Halkan waxaad ku jirtaa Tamarta Tamarta, waxaan kaa caawin karnaa inaad gurigaaga kuugu diiriso adiga oo galaya Deeqaha Dawlada. Deeqahaas waxaa ka mid ah:
Boorso lacag la'aan ah -Qalabka Loft-free - Qalabaynta Qalabka Muuqaal ee lacag la'aan ah - Hubinta Cabbirta Deeqaha Deeqaha- Deeqaha Kuleylka Guriga Cabbitaanka
Xaaladaha qaarkood, oo ku xiran xaq u yeelashada, deeqdani waxay dabooli doontaa kharashka oo dhan.
Iyada oo siyaabo badan oo lagu kululeeyo hanti, Rajada Dumarka waxay kugu caawineysaa inaad doorato xalinta kuleylka iyo biyaha kulul ee gurigaaga - waa mid waxtar leh oo ku haboon baahidaada.
Haddii aad rabto hagaajin toos ah ee kululaynta, talooyin ku saabsan qaabka kuleylka ugu wanaagsan ee gurigaaga ama nidaamka kuleylka cusub oo cusub, Energias Energy waxay ku caawin kartaa.
Waxaan rabnaa macaamiisheena in ay fahmaan sida gurigooda ay u diirran yihiin oo ay u qabaan qiimo ay awoodaan. Taasi waa sababta aad noogu soo wici karto talooyinka guud ee tamarta.
Nidaamka kuleylka ee Central - Beddelka kuleylka iyo hagaajinta - Qoryo iyo geedo geedo
tamarta la cusboonaysiin karo
Maalgalinta Tamarta ah waxaan kaa caawin karnaa sidii aad u abuuri lahayd qalabkaaga korontada ee tamarta dib loo cusbooneysiin karo oo ay ku jiraan fiilooyinka kuleyliyaha, biyaha kululeeyaha ama mashiinnada hawada ee hawada.
Abuurista korontadaada iyo kuleylku waxay noqon kartaa hab lagu heli karo habka aad ku badbaadin karto biilashaada tamartaada muddada dheer iyo inaad ka caawiso deegaanka adigoo hoos u dhigaya isku-kalsoonaanta shidaalka.
Tallaabooyinka tamarta dib loo cusboonaysiin karo sida Solar PV korontada ayaa hesha Adeegga Tarjumaadda Quudinta Dowladda (FiT) iyo dhalinta kuleylka dib u cusbooneysiinta waxay kuu ogolaaneysaa inaad hesho Horumarinta Cabbiraadaha Cusub ee Cusub (RHI).
Nagala soo xiriir si aad u hesho Hantidhowrka Tamarta Duur-joogta BILAASHeedka si loo qiimeeyo ikhtiyaarka ugu fiican ee la cusbooneysiin karo adiga, qoyskaaga iyo gurigaaga.
Tamarta tamarta ayaa ku siin karta:
Biyo-kuleyliyaha-Noocyada kuleylka-Solar PV iyo Thermal
Ku wac Call Energy maanta
Haddii aad rabto saliid cusub, gaaska ama LPG, qalabka guryaha ama tamarta cusub ee dib loo cusboonaysiin karo sida dhulka ama hawo mashiinka kuleylka kulaylka, fiilada qorraxda ama kuleylka kuleylka kuleylka ah wac Wareegtada "Happy Energy" 0800 0 246 234 oo raadi sida aan u caawin karno.